Trolleybus | RayHaber | raillynews
HomeHighwayTire Wheel SystemsTrolley fiara fitateram-bahoaka
Ny ben'ny tanànan'i Samsun Metropolitan Mustafa Demir dia nilaza fa "Ny rafitra mety indrindra ho an'i Samsun dia ny kodiarana kodiarana vita amin'ny kodiarana trolleybus miaraka amin'ny asa izay efa vitantsika hatreto." Samsun Metropolitan ben'ny tanàna Mustafa Demir, tram [More ...]
Araka ny tatitry ny Fitsarana kaonty, ny tetikasa Şanlıurfa Trambus dia manitsakitsaka ny lalàna
2018 Tatitra momba ny kaonty tsy tapaka amin'ny taona XNUMX dia iray amin'ny fitsipika fototry ny lalàna fangatahana ho an'ny daholobe amin'ny tetikasa trambus, izay tsy latsaka avy amin'ny fandaharam-potoanan'ny Şanlıurfa. nanambara fa nandika ny fitsipiky ny fangaraharana, fifaninanana, fitsaboana mitovy, tsiambaratelo ary fampiasana tsara ny fitaovana [More ...]
Inona no nitranga tamin'ny Tetikasa Trambus Şanlıurfa? Manambara ny mpiompy Bashkan taloha
Ny Ben'ny tanànan'ny Şanlıurfa Nihat Çiftçi teo aloha dia nanao fanambarana tao amin'ny kaontiny media sosialy momba ny tetikasa Trambus. Nandray anjara tamin'ny rafitra fitateram-bahoaka mba hanamorana ny fitaterana nataon'ny Ben'ny tanàna Nihat Ciftci teo aloha tany Sanliurfa [More ...]
Inona no nitranga tamin'ny Tetikasa Trambus Şanlıurfa?
Araka ny efa fantatra, ny tantaran'ny bibilava dia teny ampiasaina amin'ny lohahevitra tsy afaka mamarana ary mitohy. Fanemorana asa, ajanony ary tongava amin'ny fandaharam-potoana ary fampanatena raha tranga tsy fahombiazana. Ny mponin'i Şanlıurfa [More ...]
Fitateram-bahoaka any Malatya maimaim-poana
Ny fiara Malatya Metropolitan Municipal Public Services Services (MOTAS) dia hanome serivisy fitaterana maimaimpoana ho an'ny olom-pirenena mandritra ny Eid al-Adha. 11 - 14 Hankalazaina eo anelanelan'ny volana aogositra sy 2019 ny olom-pirenena amin'ny Eid al-Adha. [More ...]
Free buses ho an'ny mpianatra hiditra ny YKS ao Malatya
15 - 16 Ireo mpifaninana hiditra ao amin'ny YKS ny volana jona dia hahazo tombony amin'ny fiara fitateram-bahoaka ao amin'ny Kaominin'i Metropolitan maimaimpoana amin'ny alàlan'ny fampisehoana ny antontan-taratasy hidirana amin'ny fanadinana. Malatya Munisipaly Metropolitan, Ivontoerana fampianarana ambony izay hotanterahina amin'ity faran'ny herinandro ity [More ...]
Andron'ny fetibe voalohany ao Malatya Bus and Trambus Free
Ireo fiara fitateram-bahoaka sy fiara ampitan'ny MOTAŞ ao amin'ny Kaotikan'i Matropolitan Malatya dia hanome serivisy maimaimpoana amin'ny andalana rehetra manerana an'i Malatya, indrindra amin'ny andro voalohany amin'ny Ramadany. 4-6 June 2019 hankalazaina eo [More ...]
BozankayaTrambus vokarina any Tiorkia dia eny amin'ny Làlana Şanlıurfa amin'ny Mey
Ben'ny tanànan'i Sanliurfa Nihat Ciftci, nandritra ny Fihaonana farany niarahany nandray anjara tamin'ny fivoriana farany ny tetikasa Trambus noho ny fiakaran'ny vidin'ny fifanakalozana dia tsy ho vita vita amin'ny fotoana, fa hoy ny filazan'ny tarmo dia hatolotra amin'ny volana Mey. [More ...]
Ny Tranoben'ny voaloham-bahoakan'i Shina voalohany dia manomboka ny fitsapana
Ny fiara trolley fijery voalohany any North China dia nanomboka ny diany fitsapana any Harbin, ary misy teknolojia mitondra fiara. Ny Trolley dia 30 metatra ny halavany ary afaka manafaingana 70 kilometatra isan'ora. Karazana taloha [More ...]
Manitatra ny vanim-potoana isam-bolana ho an'ny Trambus ao Sanliurfa!
Ny vanim-potoana fanampiny 70 isam-bolana ho an'ny tetik'asa trambus, izay fantatra fa lafo manodidina ny 35 tapitrisa kilao ary lany amin'ny 2 tapitrisa kilao ho an'ny fotodrafitrasa, ny poleta, ny fijanonana, ny jiro misy angovo. [More ...]
Trambuses ao Malatya dia notanterahina avy hatrany
Nitsidika ny Foibe Fikojakojana sy Fanamboarana Trambus ny Ben'ny tanàna Maoderina Metropolitan Malatya, Hacı Uğur Polat ary nahazo fampahalalana avy amin'ny Tale Jeneralin'ny MOTAŞ Enver Sedat Tamgacı. Miaraka amin'ny fakan-tsary 158 eny an-tsaha [More ...]
Fitaovana ampiasaina amin'ny MOTAŞ
Miasa hanamafisana ny fahafaham-po ho an'ny mpanjifa, ny MOTA cleaning dia manohy manadio amin'ny antsipirihany ary koa ny fanadiovana isan-tsokajin'ny fiara mba hitaterana ny mpandeha amin'ny tontolo madio sy madio kokoa. tsirairay [More ...]
Trambus Tetikasa ao Sanliurfa mba hiditra ny Sampam-baovaon'ny Volana Naharitra 2
Nanangana ny tetikasa Trambus tao Sanliurfa i Şanlıurfa Metropolitan Munisipaly. Visitedanlıurfa Ny Sekretera jeneralin'ny Metropolitan Metropolitan M. Can Hallaç dia nitsidika an'i Şanlıurfa Metropolitan munisipalin'ny AS, orinasa mpamatsy ny tetikasa Trambus. Greater Munisipaly [More ...]
Minisitra Varank, BozankayaFitsapana ny Bus Eco-Friendly
Minisitry ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank, Bozankaya AŞ novokarin'i Sileo (Silent) S10 model bus no tao ambadiky ny kodiarana. Mipetraka eo amin'ny sezan'ny kapiten'ny fiara fitateram-bahoaka amin'ny tontolo iainana, izay misarika ny saina amin'ny maha-trano an-trano sy herinaratra azy [More ...]